Global Voices teny Malagasy » Mitaky RuNet madio ilay reniben’ny aterineto rosiàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Novambra 2019 13:27 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Rosia, Lalàna, Mediam-bahoaka, Solovava
Sary nampiasàna ny CC license, natambatr'i Kevin Rothrock.
Mila aterineto ‘madio’ ve ny ankizy rosiàna? Eny, raha ny hevitr'ilay parlemantera Yelena Mizulina . Ao anatin'ilay nofaritany hoe ezaka iray hiarovana tsara kokoa ireo andian-taranaka tanora ao Rosia, manao antso amin'ireo mpanome tolotra aterineto ao amin'ny fireneny i Mizulina mba hametraka politika vaovao izay hibahana – tsy tonga dia hamela ireo mpampiasa ho afaka miditra feno amin'ny tontolon'ny Tranonkala.
Araka ny drafitra narosony, omena alàlana ireo mpanjifa hanaisotra ilay rafitra fanivanana, fantatra amin'ny hoe “ny aterineto madio ,” saingy ny fanaovana izany dia ilàna manao fangatahana manokana any amin'ireo mpanome tolotra aterineto. Ilay rafitra naroso dia toy ny tsy misy valaka amin'ilay rafitra sivana tsy maintsy atrehana antsoina hoe ‘sahaza ny fianakaviana ‘, napetraky ny any amin'ireo Fanjakàna Mitambatra (UK) tamin'ny taona 2013, mba hanakanana ireo tranonkala ara-dalàna izay vinavinaina ho 20% eo ho eo .
Ny andro namoahana ireo fanehoankevitr'i Mizulina ho fanta-bahoaka, nolazainy taminà vondrona iray mpivarotra matihanina momba ny teknolojia izay nvory tao amin'ny Douma fa ny iPhone sy ny aterineto finday dia manamora ny asa ‘fandotoana ankizy ‘
Mpanao lalàna diso fantatry ny maro hatrany amin'ny fisasahan'ny andian-taona 1990 tany, Mizulina dia iray amin'ireo tena mpifikitra mafy amin'ny sosialy nentindrazana ao Maosko. Nanampy famin'ny fampandaniana lalàna nikendrena ireo ‘fampielezankevitry ny pelaka’, fandraràna ny Amerikàna tsy hanangana zaza rosiàna, ary fampiroboroboana ny Ortôdôkia rosiàna ho toy ny fototra ijoroan'ny kolontsaina amantarana ny firenena. Mizulina koa no mpitarika ny fanoratana ny lalàna iray tamin'ny 2012 izay nampiditra ny lisitra mainty tao Rosia, izay ankehitriny manakana tranonkala maromaro, ka isan'ireny ireo vavahadim-baovao marobe.
Sarotra takarina ny lojika mirentirenty ao ambadiky ny nofinofin'i Mizulina hanisy tontolon'ny aterineto madio. Soa ihany, tao anaty antsafa  iray niarahany androany tamin'ny gazety Izvestia, nohazavainy ny anton'ny fijeriny. Mba hahatakarana ny fomba fijerin'ilay tena renibe mavitriky ny RuNet, nezahan'ny RuNet Echo ny namintina ireo fantina rehetra avy amin'ny antsafa nataon'i Mizulina ho an'ny Izvestia.
Fahombiazana ilay Listra Mainty ho an'ny RuNet satria ankehitriny i Rosia dia fahatelo avy any amin'ny lohany amin'ny famokarana resaka vetavetan'ankizy.
Mizulina milaza hoe:
Araka ireo angondrakitra momba ny fitsinjarana ny resa-betavetan'ankizy avy amin'ny tambajotra mivantana iraisampirenena INHOPE, izay mandrakotra firenena 49, nandao ny toerana voalohany erantany ka lasa any amin'ny toerana fahatelo i Rosia, eo ambanin'i Etazonia sy Pays_Bas. Midika izany fa efa miala any ny fandrosoana lehibe mankamin'ny tsara.
Ny fanivànana mandeha ho azy atao amin'ny tranonkala dia tsy hametra ny fahalalahana hahazo vaovao. Ny fandraràna tsy hamono olona tsy hitondra ny tsirairay ho any am-ponja.
Izvestia: Tonga saina ve ianao hoe hiteraka ambony ambany eny anivon'ny rehetra ilay fametrahanao tolodalàna hanao sivana mialoha?
Mizulina: Ny fanaovana ny vono olona ho heloka bevava tsy midika mihitsy hoe izao tontolo izao no ho any ambadiky ny karakara vy… Avelantsika ho an'ny tsirairay ny fanapahankevitra [farany].
Tsy manamora ny famoretana politika ny Lisitra Mainty an'ny RuNet. Ireo mpijirika matihanina amin'ny resaka vetevetan'ankizy, ny zavamahadomelina, ary …mpanosika ho any amin'ny famonoantena ve no hany olona manohitra azy io?
Tsy misy zavatra hafa afa-tsy fanararaotana politika fotsiny [ireo hetsipanoherana manohitra ilay Lisitra Mainty]. Ireo olona zatra mandefa ireny antontankevitra mampisalasala ireny sy mivelona amin'io fomba io no tsy faly amin'izao fotoana izao. Rehefa amboa haolo dia amboa haolo. Misy vondron'olona mpândresy lahatra mampiasa ny aterineto ho fanelezana zavamahadomelina, ho fandotoana ny ankizy, ary handrisihana ny ankizy ho any amin'ny famonoantena. […]
Ankoatra ilay vondrona mpandresy lahatra amin'ny resaka zavamahadomelina sy vetaveta, mbola ilain'i Rosia ny fanivànana misimisy kokoa ny aterineto satria 87 isanjato amin'ny vetavetan'ankizy dia zaraina maimaimpoana.
Sady koa, tsy maha-voasazy ao Rosia ny fitazonana sarimihetsika misy vetavetan'ankizy raha toa ka tsy mitodika mankany amin'ny varotra izany. Fanampin'izay, ny angondrakitry ny INHOPE dia mampiseho fa 87 isanjato amin'ireo votoaty miresaka vetavetan'ankizy dia zaraina maimaimpoana tsy ho amin'ny resaka varotra.
Raha toa manamarina ny momba azy ireo mpampiasa, dia afaka ny tsy mandray anjara amin'ilay sivana ary raha toa manaiky ny hiantsoroka ny andraikiny ateraky ny fidirana amin'ireo votoaty an-tranonkala tsy voasivana — izay mampididoza ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny ankizy rehetra.
Mba hanesorana ilay sivana, ilain'ny mpampiasa ny miditra aminà fanekena fanampiny iarahana amin'ny mpanome tolotra, hanamafisana ny taonany sy ny sisa. Raha toa manao sonia ireo ray aman-dreny, ilain-dry zareo ny mahatakatra izay mety ho dona goavana atrehan'ny ankizy, hatramin'ny andraikitr'izy ireo amin'izay rehetra dona manjo ny fahasalamana sy ny fahatonian'ny zanany.
Afaka ny hanana ‘aterineto madio’ i Rosia, tsy ilàna ny firotsahana an-tsehatry ny fanjakàna. Tsy misy na inona na inona manakana ny indostrian'ny firenena tsy hametraka sivana an-tranonkala amin'ny fomba tsy miankina.
Resy lahatra aho fa ny fampidirana sivana mandeha ho azy dia azo atao tsy ilàna lalàna fanampiny. Resahantsika ny momba ny lanjan'ny fanivanantena ataon'ny indostria, ny momba ny andraikitry ny tsirairay amin'ireo solontenan'ny sehatry ny aterineto: ireo mpisehatra, ireo mpamatsy fiantranoana ary ireo tomponà fitaovana. Azon'izy ireo atao tsara ny manome io ‘aterineto madio’ io tsy misy fitsabahan'ny fanjakàna. Izany eo ihany, fa rehefa tena atao, tsy arakarak'izay ny fandehany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/18/144828/
 ny aterineto madio: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
 ‘sahaza ny fianakaviana: http://www.computerweekly.com/news/2240223883/UK-internet-porn-filters-a-failure-says-Open-Rights-Group
 tranonkala ara-dalàna izay vinavinaina ho 20% eo ho eo: https://www.openrightsgroup.org/blog/2014/blockedproject
 fandotoana ankizy: http://tjournal.ru/paper/mizulina-iphone